Les Blés de Chanel - အလွန်မြင့်မြတ်သောအိပ်မက်
စက်တင်ဘာလ 22, 2016
Gabrielle Chanel ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထင်ရှားဆုံးအမှတ်အသားတစ်ခုအားထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း - ဤသည် CHANEL ၏နောက်ဆုံးပေါ်အမြင့်ဆုံးရတနာစုဆောင်းမှု Les Blés de အတွက်ဖန်တီးမှုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ Chanel.
Mlle Chanel ၏ဘ ၀ တွင်ဂျုံသည်အရေးပါသောကဏ္playsမှပါဝင်သည်။ သူမသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ၊ အမှတ်တရလက်ဆောင်များ၊ သူမနေထိုင်ခဲ့သည့်အိမ်များ၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလွှမ်းမိုးသည်။
ဤရွေ့ကားသူမဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်သောအမှတ်တရများနှင့် CHANEL ၏မြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း၊ Les Blés de Chanelဤထာဝရသစ်ဆုတ်ခြင်း၏ပြယုဂ်၊ ကြွယ်ဝမှု၊ ကံကောင်းခြင်း၊ သာယာဝပြောမှုနှင့်အဆုံးမဲ့ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်တို့ဖြင့်ပဲ့တင်ထပ်နေသည်။
စုဆောင်းခြင်းသည်ဂျုံဘဝ၏သံသရာနောက်လိုက်ခြင်း၊ 62 မြင့်သောရတနာအပိုင်းပိုင်း သူတို့ရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုအားလုံးထဲမှာနွေးထွေးတဲ့လေပြေလေညင်းမှာရွေ့လျားနေတဲ့ဂျုံခင်းတစ်ခုလိုပါပဲ။
«ပရီမီယံ Brins","Brins က de Printemps»နှင့်«Brins က de Diamants»နွေ ဦး ပေါက်ရာသီ၏နူးညံ့သည့်နူးညံ့သောဂျုံအညွန့်များကိုအလေးထားပါ။ စိန်၊
၁၈ ကာရက်ရွှေဖြူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော“ Premiers Brins” လက်စွပ်ကို ၁ ကာရက်တောက်ပသောစိန်နှင့် ၆၀ ဖြင့်ထားသည်
စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၁.၃ ကာရက်ရှိသောစိန်များ။
18 carat marquise-cut peridot နှင့်အတူ 9.8K ရွှေဖြူရွှေရောင်ရှိ“ Brins de Printemps” လက်ကောက်၊
စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၁ ကာရက်ရှိ marquise ဖြတ်ထားသော peridots ၄ ခု၊ အစိမ်းရောင် Tourmalines ၆ ခု
စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၁.၅ ကာရက်၊ ၃.၂ ကာရက်၊ အလေးချိန် ၃၁ ကာရက်၊ စိန် ၂၃၃ လုံး၊
သစ်တော်သီးဖြတ်ငါးမွေးမြူရေးနှင့်သစ်တော်သီးခုတ်လှဲသော Tourmaline ၂ ခု။
18K ရွှေဖြူရှိ“ Brins de Diamants” လက်ကောက်သည်ဖန်စီဖြတ်ထားသောစိန်ပေါင်း ၈၂ လုံးနှင့်စုစုပေါင်းအတွက်
အလေးချိန် (၁၈ ကာရက်)၊ ၆.၂ ကာရက်နှင့် (၂) လုံးအတွက်တောက်ပသောစိန် ၂၁၆ လုံးရှိသည်
စပါးရိတ်ရာကာလ«၏အမျိုးမျိုး၏မှတဆင့် evoked ဖြစ်ပါတယ်Moisson Ensoleilléeဖြစ်သည်","Bouquet de Moisson»နှင့်«Moisson က de Perlesစိန်များ၊ အဝါရောင်နီလာများနှင့်ပုလဲများသည်နွေရာသီနေရောင်၏ရွှေရောင်နွေးထွေးမှု၌အနားယူရာနေရာဖြစ်သည်။
«Moisson d'Or» ၁၆.၈ ကာရက်ရှိအဝါရောင်နီလာနီလာဖြင့်ချည်ထားသောဂျုံခင်းကိုပေးသည်။ ဤစိန်နှင့်နီလာများမှုတ်ဆေးသည်စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၄၇၇.၅ ကာရက်ရှိအဝါရောင်နီလာ ၉၇၇ စည်ဖြင့်လည်ဆွဲရှည်၏အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။
18K အဖြူနှင့်အဝါရောင်ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော“ Moisson d'Or” လည်ပင်းမှာ ၁၆.၈ ကာရက်ရှိသောဘဲဥပုံ - အနီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်
အဝါရောင်နီလာ၊ အလေးချိန် ၃ ကာရက်ရှိပြီး ၃၂၉ လုံးသောစိန် ၂၇ လုံးအတွက်စိန် ၂၇ လုံးစိန်
စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၆.၇ ကာရက်ရှိစိန်များ၊ ၁၁ လုံးတောက်ပသောအဝါရောင်နီလာများဖြစ်သည်
စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၄၇၇.၅ ကာရက်ရှိအလေးချိန် ၁.၉ ကာရက်နှင့် ၉၇၇ အနီနီလာပုတီးစေ့။
အလားတူလှုံ့ဆော်မှုကို ၁၇.၁ ကာရက်ရှိအဝါရောင်ကူရှင်နီလာကျောက်မျက်ရတနာ၊ ပုတီးနှင့်လက်စွပ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
18K အဖြူနှင့်အဝါရောင်ရွှေရောင်ရှိ“ Moisson d'Or” လက်စွပ်ကို ၁၇.၁ ကာရက်ကူရှင် - အဝါရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်
နီလာ၊ စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၁.၇ ကာရက်နှင့် ၁၃၂ တောက်ပသောစိန် ၁၄ ခုပါသည့်စိန် ၁၄ ခု
စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၁.၆ ကာရက်ရှိစိန်များ။
«Moissons Fête»ကျစ်ဂျုံ၏သရဖူကျင်းပ။ လည်ဆွဲ၏အလယ်တွင်ထောင့်ဖြတ်ထားသော ၂၅ ကာရက်ရှိသောအဝါရောင်စတုဂံစိန်သည်အလေးချိန် ၄၆.၇ ကာရက်၊ အလေးချိန် ၄၆.၇ ကာရက်၊ ၄၀.၄ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောစိန်ပေါင်း ၉၃၂ လုံးနှင့်စိန်ဖြူ ၁၆၅ ခုတို့ကိုဂျုံတစ်လုံးဖြင့်မီးထွန်းပေးသည်။ လက်စွပ်တစ်လုံး၊ လက်ကောက်နှင့်နားကပ်တစ်ချောင်းစီသည်ဤအရာကိုပြီးစေသည်။
၁၈ ကာရက်ရှိအဖြူနှင့်အဝါရောင်ရွှေရောင် ၂၅ ကာရက်ဖြင့်အလှဆင်ထားသော“ Fête des Moissons” လည်ဆွဲ။
စတုဂံ - ပြုပြင်ထားသောတောက်ပသောအဝါရောင်စိန်ပွင့် ၁၂၁ ဖန်စီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်
စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၄၆.၇ ကာရက်၊ ရောင်စုံသောအဝါရောင်စိန် ၉၂၂ လုံးရှိသောရောင်စုံစိန်များ
စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၄၀.၄ ကာရက်၊ ၃.၁ အလေးချိန်ရှိသော marquise-cut စိန် ၁၀ ခု
စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၁.၄ ကာရက်နှင့် ၁၅၁ တောက်ပသောစိန်များဖြစ်သည်
စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၃.၃ ကာရက်ရှိစိန်များ။
အလေးချိန် ၂၁.၂ ကာရက်ရှိစုစုပေါင်းအလေးချိန် ၂၁.၂ ကာရက်၊ ၅၆၄ တောက်ပသောအဝါရောင်စိန်ပွင့်များဖြင့် ၁၈.၁ ကာရက်ဖြတ်တောက်ထားသည့်စတုဂံပုံစံပြုပြင်ထားသောတောက်ပသောအဝါရောင်စိန်နှင့် ၁၈ ကီလိုရွှေဖြူနှင့်အဝါရောင်ရွှေရောင်အဖြူရောင်၊ “ Fête des Moissons” လက်ကောက်။ စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၂၀.၅ ကာရက်၊ စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၁.၅ ကာရက်၊ သစ်တော်သီးဖြတ်စိန် ၃ လုံး၊ စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၂.၉ ကာရက်၊ စိန် ၉ လုံး၊ ၂.၉ ကာရက်၊ အလေးချိန် ၁.၃ ကာရက်နှင့် ၂ မျက်နှာ - ဖန်စီပြင်းထန်သောအဝါရောင်စိန်များကိုဖြတ်ယူပါ။ CHANEL လက်ဝတ်ရတနာများ
စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၆.၄ ကာရက်ရှိအလေးချိန် ၆.၄ ကာရက်၊ စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၅.၂ ကာရက်ရှိတောက်ပသောစိန် ၁၄ ခုနှင့်တောက်ပသောဖြတ်စိန် ၁၄၀ ဖြင့် ၁၈ ကီလိုဂရမ်အဝါရောင်ရွှေရောင်ရှိFête des Moissons ရွှေနားထည်များ အလေးချိန် ၄.၇ ကာရက်၊ တောက်ပသောစိန် ၁၄ ခုနှင့် marquise-cut စိန် ၂ ခု။ CHANEL လက်ဝတ်ရတနာများ
၁၈ ကီလိုဂရမ်အဖြူနှင့်အဝါရောင်ရွှေရောင်ရှိFête des Moissons လက်စွပ်ကို ၆.၅ ကာရက်ဖြတ်ထားသောထောင့်မှန်စတုဂံ - ပြုပြင်ထားသောတောက်ပသောအဝါရောင်စိန်ပွင့်၊ ၂.၆ ကာရက်ရှိစုစုပေါင်းအလေးချိန် ၂၆.၆ ကာရက်၊ ထူးခြားသော ၁၀၁ ထူးခြားသောစိန်ပွင့် ၇ လုံးနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၂.၇ ကာရက်၊ စိန် ၂ လုံးနှင့်တောက်ပသောစိန် ၂ လုံးအတွက်အဝါရောင်စိန်များ။ CHANEL လက်ဝတ်ရတနာများ
«ချန်ပီယံ de Blé","impression de Blé»နှင့်«Blé Infini ပါ»ဂျုံမှုန့်နှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားသောအရာများရှိပြီးတန်ဖိုးကြီးပြီးတောက်ပသောပုံစံဒီဇိုင်းကိုတီထွင်သည်။
စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၂၉.၆ ကာရက်ရှိ“ Champ de Blé” cuff ကို 18K ရွှေရောင်အဝါရောင်ရွှေဖြူနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအစိမ်းရောင်ဖြတ်ထားသောစိန် ၈၆၉ လုံးရှိသည်။
18K အဖြူနှင့်အဝါရောင်ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော“ Impression de Blé” လက်စွပ်ကို 2.7 carat marquise-cut တပ်ဆင်ထားသည်
ဖန်စီပြင်းထန်သောအဝါရောင်စိန်၊ ဖန်စီ - ဖြတ်ရောင်စုံစိန် ၆ လုံးစုစုပေါင်းအလေးချိန်ရှိသည်
စုစုပေါင်းအလေးချိန် 1.3 ကာရက်အတွက် 156 ကာရက်နှင့် 2.8 တောက်ပသောစိန်။
နောက်ဆုံး၊Légende de Blé»လည်ပင်းတွင်ရွှေဖြူနှင့်အမြင့်ဆုံးသောဂျုံစပါးကိုလည်းကောင်း၊ စိန်များကိုလည်ပင်းတစ်ဝိုက်တွင်ဖုံးအုပ်ထားသောကြောင့်နွေရာသီ၏အဖိုးတန်ဆုံးသောလက်ဆောင်များကိုပြသသည်။
၁၈ ကာရက်ရွှေဖြူ၏“ Légende de Blé” လည်ဆွဲသည် ၅ ကာရက်ရှိ Marquise ဖြတ်ထားသည့်စိန်၊
စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၁၀.၄ ကာရက်နှင့်စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၁၇.၆ ကာရက်ရှိစိန် ၈၃၉ ခုအတွက် marquise-cut စိန်များ။
ဤစုဆောင်းမှုဖြင့်ဂျုံသည်တံခါးများကိုဖွင့ ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အား CHANEL High Jewellery သို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး Gabrielle Chanel ၏အထင်ရှားဆုံးနှင့်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောသင်္ကေတများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ CC
By ဂလော်ဒီယာ Carletti။ ၏ပစ္စည်းယဉ်ကျေး Chanel.
Tags:Chanel • မြင့်မားသောရတနာ • ပဲရစ်
မှတ်ချက်2ခုLes Blés de Chanel"
သင်ဒီမှာကောင်းတဲ့အချက်အချို့ကိုတွေ့ပြီ မည်သည့်လမ်း wrinting တက်စောင့်ရှောက်လော့။
HJD ကိုလိုက်နာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါတို့သည်သင်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ကြသည်။